15 Dariiqo oo Lagu Kordhiyo Liiska Suuqgeynta Emailkaaga. Martech Zone
15 Siyaabood oo Loogu Kobciyo Liiska Suuqgeynta Emailkaaga
Jimco, Oktoobar 18, 2013 Khamiista, Oktoobar 17, 2013 Douglas Karr
Kobaca, kobaca, koritaanka… qof walbana wuxuu raadinayaa inuu helo taageerayaal cusub, kuwa raacsan oo cusub, booqdayaal cusub, cusub .. cusub .. cusub. Ka warran booqdayaashaada jira? Maxaad sameyneysaa si aad u horumariso fursadda aad ugu kaxeyn karto inay ku dhowaadaan inay ganacsi kula yeeshaan? Waan qaladnay nafteena… riixitaanka raadinta wanaagsan, dhiirrigelin dheeraad ah, joogitaanka bulshada oo kordhay. Natiijooyinka ayaa had iyo jeer ahaa booqdayaal badan oo goobta ku yaal laakiin daruuri maahan dakhli badan oo ka hooseeya. Horumarinta liiska emailkaaga waa inuu noqdaa istiraatiijiyad aasaasi u ah istaraatiijiyadaada internetka.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, diiraddeennu dhab ahaantii way ka jeesteen taageerayaasha iyo kuwa raacsan waxayna u guureen dhexdhexaadiyeyaasha - gaar ahaan suuqgeynta emailka. Liistadeena ayaa sii kordheysa waxayna ku taal a macaamiisha la ixtiraamo ee 100,000. Waxay nagu qaadatay toban sano inaan ku gaadhno meeshaas laakiin, shaki la'aan, waa maalgashiga ugu fiican ee aan waligeen sameynay. Markii aan soo diro emayl, waxay isu beddelaysaa dakhli toos ah ama toos noogu hogaamisa shirkadaha aan ka wada hadalno. Dhawaan uun, Shel Israel iyo Robert Scoble ayaa igaga mahadceliyay kororka ay ku arkeen iibintooda buugaag markii warside-yadeennii toddobaadlaha ahaa soo baxay.
@douglaskarr Waxaan aragnaa kor u kac xagga iibka ah, Doug. Thx ka @sabeeye iyo aniga.
- shel israel (@samiirislaam) October 15, 2013
Horumarinta liiska emailkaaga way ka duwan tahay ku darida taageerayaasha ama kuwa raacsan. Haysashada booqde waxay ku siineysaa inaad marin toos ah ugu hesho sanduuqooda sanduuqa waa calaamadda ugu dambeysa ee kalsoonida. Waa aamin aan aheyn in lagu xadgudbo, laakiin xaqiiqdii waa in la daryeelaa. Haddii aad si adag uga shaqeyneyso inaad dadka u keento bartaada oo aadan haysan hab aad ku qorto, waxaad si fudud uga tagaysaa lacagta miiska shirkaddaada. Markay dadwaynuhu ku soo noqdaan bartaada si isdaba joog ah, way isqori doonaan markay u maleeyaan inay qiimo ku jirto rukunka.
Horumarinta liiska emailkaaga sidoo kale waxay u baahan tahay shaqo adag. Bixiyeyaasha adeegga emaylku waxay ku helayaan wax lagu qoslo la macaamilka shirkadaha kor u qaada liisaskooda si deg deg ah iyagoo ka baqaya inay waxyeelleeyaan guud ahaanba soo-saaritaankooda. Waxaan dagaal kula jirnay dhowr iibiyeyaal maxaa yeelay waxay doonayeen inay yareeyaan awooddeena inaan ku darno liisaskayada. Waxay u maleynayaan inaad tahay spammer markaad soo dhoofineyso dhowr kun oo macaamiil ah - maahan inaad si fudud uga soo gasho webinar aad ku darto.
Halkan waxaa ku yaal dhowr fikradood oo ku saabsan liis-dhisid iyo haynta GetResponse taasi waxay kaa caawin doontaa inaad ka hesho natiijooyinka ugu fiican dhammaan howlaha suuq-geynta emaylkaaga. GetResponse waxay leedahay a 15% dhimis nololeed haddii aad iska diiwaangeliso xiriirkeena xiriirka. Waxay leeyihiin boqollaal sheybalood oo fantastik ah iyo isdhexgalka dhagaxa adag ee u fudud qof walba inuu isticmaalo.
Bixi Qiime - Toddobaad kasta, waxaan la wadaagnaa qoraalladeenna ugu dambeeyay iyo farriin gaar ah oo ku socota macaamiisheena. Mararka qaarkood waa qiimo dhimis, mararka qaarkoodna waa talo adag oo dhagaystayaasheena ay isticmaali karaan. Hadafkeenu waa in macmiil kasta uu ka helo wax qiimo leh e-mayl kasta oo aan dirno.
Foomamka rukunka - Maaha wax qurux badan, laakiin hoos u dhaca ku yimid boggayaga ayaa naga dhigaya in ka badan 150 macaamiil cusub bishii! Waxaan sidoo kale leenahay a subscribe dheh. Waxaan sidoo kale tijaabinay foomamka soo-baxa bartamaha shaashadda waxaanan ka helnay natiijooyin aad u wanaagsan - laakiin wali waxaan ku jiraa xayndaabka sidii aan u dhex geli lahaa.
Saxeexyada Bulshada - Kudar foom saxiix ah boggaaga Facebook oo u soo bandhig taageerayaashaada iyo kuwa raacsan fursad ay isku diiwaan geliyaan marba mar. Waxaan isku dayeynaa inaan halkaas ka riixno qiyaastii bishiiba mar.
U Fudud - Ha i weydiinin tan tan ah fields cinwaanka emaylka oo magac waa bilow weyn. Marka dadka waaweyni doortaan dalabyo kale waxaad codsan kartaa macluumaad dheeri ah. Saxiix emailkaagu la mid ma aha qof doonaya inuu ganacsi kula sameeyo, wax uun bay kula sii hawl galayaan. Ha ka nixin iyaga!
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Akhristayaashaada ogeysii inay ku kalsoonaan karaan inaadan macluumaadkooda la wadaagi doonin dadka kale. Habka ugu fudud ee tan loo sameyn karaa waa in la dejiyo bogga internetka ee Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah oo aad ku siiso xiriiriyaha ka hooseeya foomka xulashadaada. Haddii aadan aqoon sida loo qoro mid, waxaa jira kuwa waaweyn Soosaarayaasha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah online.
Muunado - Dadku ha tusaan tusaalaha joornaalkaaga! Waxaan badanaa ku daabacnaa isku xirka wargeyskeena ugu dambeeya markaan ku riixno dadka in ay ku biiraan warbaahinta bulshada. Markay arkaan, way garanayaan waxa laga filan karo waxayna doortaan.
archive - Lahaanshaha maktabad khadka tooska ah ee wargeysyadii hore iyo qoraallo ayaa labadaba rafcaan iyo waxtar u leh martida waxayna dhisaysaa kalsoonidaada maamul ahaan. Intaa waxaa sii dheer, haddii maqaalladaada ay ku qoran yihiin farsamooyin wanaagsan oo SEO ah maskaxda, waxay ku kordhin karaan taraafikada boggaaga iyada oo loo marayo meelaynta mashiinka raadinta ee kor loo qaaday.
Soo Bandhig - Haddii mid ka mid ah kafaala-qaadayaasheena ay leeyihiin qiimo-dhimis ama wax-bixin, waxaan u adeegsan doonnaa taas si aan ugu qancinno dadka waawayn inay doortaan joornaalkeenna soo socda si ay uga faa'iideystaan ​​dalabkan. Bixinta dheefahaani waxay ka dhigeysaa macaamiishaadu inay sidoo kale doortaan!
Ereyga Afka - ku soo bandhig xiriiriyaha emaylkaaga halkaasoo macaamiishaadu ay kula wadaagi karaan joornaalkaaga shabakadooda. Ereyga afka waa hab awood leh oo loogu daro macaamiisha!
La wadaag Mawduucaaga - la wadaagida waxyaabaha aad la wadaagto xarumaha kale waa hab fiican oo lagu soo jiito dhagaystayaashooda liiska suuq geynta emaylkaaga. Dadku marwalba waxay raadinayaan inay wadaagaan waxyaabo aad u fiican - kuwaaga sii oo ha iyaga kaliya bixiyaan khadadka macaamiisha halkaas oo ay dadku isku diiwaan gelin karaan wax intaa ka badan!
Saxiix - haysashada badhanka rukunka kaliya muhiim kuma ahan bartaada, runtiina waxay muhiim u tahay emaylkaaga sida loogu gudbiyo kuwa kale. Hubso inaad ku haysato badhan saxeex warqad kasta oo baxa!
Beddelo More - Markay dadwaynuhu iska diiwaangeliyaan bogga soo degitaanka, ku dar faallo, ama kula soo xiriiraan meel kasta oo ka mid ah boggaaga, miyaad bixisaa habab aad ku doorto liiska suuqgeynta emailkaaga? Waa in aad!
Markhaatiyadayada - Ku dar markhaatiyada ku saabsan rukunkaaga oo riix bogagga. Tani waa muhiim. Ku dheji hal ama laba markhaati oo adag oo ka socda macaamiisha qanacsan boggaaga cadaadin. Si aad u sii xoojiso kalsoonida, u hel rukhsad aad ku isticmaasho magacyada macaamiisha dhabta ah, goobaha iyo / ama urliska (Ha u isticmaalin 'Bob K, FL').
Blog ku diin - Blogging-ku waa hab fiican oo lagula xiriiro rajada iyo macaamiisha mustaqbalka, waxayna ku abuureysaa is dhexgal wanaagsan suuqgeynta emaylkaaga. Hubso inaad ku darto foomka is-qoritaanka joornaalka bog kasta oo ka mid ah balooggaaga.
Tilmaamaha ugu weyn # 15 wuxuu ahaa shaqadeena ugu weyn. La shaqee ururada kale si Bixi rukunkaaga. Markii aan ka shaqeyno websaydhka macaamiisha, waxaan bixinnaa rukunka waqtiga diiwaangelinta. Markii aan ka hadlayno dhacdo, waxaan u soo bandhigeynaa dadka waawayn fursad ay si toos ah iskaga diiwaan geliyaan boggeena internetka. Xitaa waxaan bixinaa karti aan ugu qoro rukunkaaga SMS - waa hab fiican oo lagu heli karo dadka waawayn!
Tags: macaamiil emailkobci suuqgeynta emailkaliiska koritaankakoro liiska macmiishakobci liiskaaga
7-da khuraafaad ee Suuqgeynta Emailka
Sharaxa Soosaaraha Muuqaalka
suuqgeynta emailka ayaa ka mid ah habka loo sameeyo suuqgeynta tooska ah iyo aruurinta rajooyinka iyo macaamiisha adduunka oo idil. Waa hab wax ku ool ah oo lagu kordhiyo suuqaaga
Feb 1, 2014 markay ahayd 3:30 PM
Waxaan sidoo kale tijaabinay foomamka soo-baxa bartamaha shaashadda oo aan haysannay
natiijooyin fiican - laakiin wali waxaan ku jiraa xayndaabka sidii aan u dhex geli lahaa.